Naya Bikalpa | पुुनको आपराधिक कार्यमा को–को नेता सहयोगी ? - Naya Bikalpa पुुनको आपराधिक कार्यमा को–को नेता सहयोगी ? - Naya Bikalpa
पुुनको आपराधिक कार्यमा को–को नेता सहयोगी ?
प्रकाशित मिती: २०७५ बैशाख १०, ०८: १९: ४२
बुटवल । रूपन्देहीको देवदह खैरेनीका कुख्यात डन मनोज पुनको आपराधिक संजाल फिल्मी शैलीमा खुल्दै गएको छ । युवाहरूको समूह बनाएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्कापट्टामा हिस्सा खोज्न थालेका पुनको अपराधको जालो १० वर्षमा उद्योगी व्यवसायीदेखि एमालेका नेताहरूसम्म पुगेको भेटिएको छ । ०६४ सालपछि जिल्लास्तरका ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गर्न थालेका पुन साना तिना अपराधलाई लुकाउन दलका एमाले भ्रातृसंगठन यूवा संघमा आवद्ध थिए ।
कुनै बेला माओवादी केन्द्रनिकट वाइसिएल र एमाले निकट युथ फोर्समा आवद्ध भएका पुनले दलका नेता र कार्यकर्तालाई आफ्नै समूहमा आवद्ध गर्दै अपराध कर्मलाई विस्तार गर्दै लगेको जालो प्रहरीले पत्ता लगाएको हो । मनोजले अपराधलाई यसरी विस्तार गर्दै रहेको सूचना एमाले नेताहरुलाई थाहै नभएको होइन तर उनीहरुले यो संजाल तोडाउन नसकेर विवस भई स्वीकार्दै आएको देखिएको छ ।
रूपन्देहीमा मनोज पुनको समूहले गरेका अपराधका सहयोगीदेखि सुटरसम्म पक्राउ परेका छन । देवदहका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने, एमाले निकट युवा संघ केन्द्रीय सदस्य तथा रूपन्देही इन्चार्ज सुजु मल्ल, बुटवलका एमाले कार्यकर्ता उत्तम आचार्य, तुलसी न्यौपाने, बुटवलका व्यवसायी हरिप्रसाद श्रेष्ठ, देवदहका जग्गा कारोबारी रोशन खड्का पक्राउ परेका हुन् । यसअघि हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा समिरमान बस्नेत, श्याम गोम्बे, पदम चौधरी, महिनारायण चौधरीलगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । तीमध्ये केही सजाय भोगिरहेका छन् भने केही अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।
मनोजको समूहले बुटवल र देवदह क्षेत्रमा मात्रै होइन, काठमाडौं र देशका मुख्य शहरहरूमा समेत आफ्नो संजाल विस्तार गर्दै थियो । गत चुनावअघि नै पर्दाफास गर्दा एमालेका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू समेत संलग्न रहेको फेला परेपछि त्यसको खुलासा हुने त्रासले राजनीतिक नेतृत्वका कारण प्रहरीले गुपचुप राखेको थियो । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले चुनावअघि नै यी सबै विषयमा प्रहरीको अनुसन्धान एउटा तहमा पुगेको भए पनि चुनावलाई असर गर्छ भनेर एमाले नेताहरूले नै प्रहरीलाई अघि बढ्न नदिएका हुन् । अहिले यसरी त्यो संजालको रहस्य खुल्दै जाँदा सबै आश्चर्यचकित भएका छन् ।
दिनभर हत्याको विरोधमा हिँड्ने एमाले कार्यकर्ता नै रातभर हत्याका योजनाकारलाई साथ दिदै हिँडेको रहस्य समेत प्रहरीले वाहिर ल्याएको छ । ‘मनोज पुनले धम्क्यायो, मलाई सुरक्षा दिनुर्पयो भन्ने एमाले यूवा संघका नेता सुजु मल्ल रातपरेपछि भने हत्यापछिको सबै गोप्य बैठकहरूमा जाने र चर्को विरोध गर्ने गर्दथे । मनोज पुनलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सघाउने वचन दिने सुजु मल्ल भने यतिवेला प्रहरीको फन्दमा परेका छन् । मनोज पुनले धम्क्याउँदै मलाई यतिबेला फोन गर्छु भनेको छ भन्दै प्रहरीसँग आउने र फोन आएपछि कुराकानी पनि गर्ने तर एक्लै भएको बेलामा सबै कुरा पुनलाई बताउने काम सुजु मल्लले गर्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ ।
रूपन्देहीका व्यवसायीहरूको सूची र फोन नम्बर टिपाए र पुनलाई मल्लले नैं पु¥याउने गरेको अडियो प्रहरीले सार्वजनिक गरेपछि एमाले नेता र सुजु मल्ल नैं डन पुनसँग जोडिएको प्रहरीको आशंका छ । सुजु मल्लले आफ्ना सहयोगी उत्तमलाई तिहार खर्च भनेर पाँच लाख दिने र त्यसको चेक सुजुले काट्नेसम्म काम गरेका थिए । हरि श्रेष्ठलाई मनोजले फोन गरेर धम्क्याउने, रकम माग गर्ने र हरिले रकम पठाइदिने अनि त्यही रकम मनोजले फिर्ता पठाउने कुरा समेत मल्लबाट प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । पुनले फिरौती माग्नेको, उद्योगी व्यवसायीको सूची प्रहरीले मनोज पुनबाट बरामद गरेका डायरीहरूमा फिरौतीका लागि सूची बनाएको भेटेको थियो ।
प्रहरीसँग रहेको डायरीमा उद्योगी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलगायतको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर रहेको सूची छ । पश्चिम क्षेत्रका करिब ४०० उद्योगी व्यवसायीको सूची डायरीमा टिपिएको प्रहरीले फेला पारेको थियो । केही भारतीय बैंकका एटिएम समेत प्रहरीले पुनको डायरीसँगै फेला पारेको हो ।
के गर्थे एमालेका नेताहरू ?
२०७२ कार्तिक २२ मा नारायण बस्नेतको हत्या प्रयास, २०७२ फागुन ६ मा दुर्गा तिवारीको हत्या प्रयास, २०७३ पुस ४ मा तिवारीको हत्या, २०७४ पुस २१ मा वसन्त पौडेलको हत्याका घटनामा समेत एमाले नेताहरुको सहयोग रहेको प्रहरीले फेला पारेको छ ।
मनोज पुनका आपराधिक क्रियाकलापमा धेरै लामो समयदेखि नै रहँदै आएका सुजु मल्ल मनोज पुन र प्रहरीबीच मुठभेड हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि सम्पर्कमै रहेको प्रहरीले तथ्य फेला पारेको थियो । पुनसँग भारतका कुख्यात अपराधी विट्टु भनिने योगेन्द्र सिंहसँग समेत सम्पर्कमा रही सूचना आदान प्रदान गर्ने काम पनि पक्राउ परेका नेता र व्यवसायीले गर्थे । पछिल्लो समय समातिएका लेखनाथ न्यौपाने, उत्तम आचार्य, रोशन खड्का र तुलसी न्यौपानेले रकम असुलीका लागि काम गर्ने गरेको तथ्य प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको सूची पुनलाई दिने र हत्याका लागि वातावरण मिलाउने, पक्राउ परेकाहरूलाई छुटाउनका लागि दलका नेताहरूसँग आग्रह गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुको थियो । गत फागुन ९ मा मनोज र सहयोगी सोम आले ‘इन्काउन्टर’मा मारिएपछि प्रहरीले उनीहरूको पछाडि रहेको शक्तिकेन्द्रको खोजी थालेको थियो । पछिल्लो पटक छ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले अरू केही व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रममा रहेको बताएको छ । ‘अहिले समातिएका भन्दा अरू धेरै माथिल्लो स्तरका व्यक्तिहरू शंकाको दायरामा रहेको प्रहरीले आशंका गरेको छ ।
२०७५ बैशाख १०, ०८: १९: ४२